2015-08-09 ~ ELS, English Language School (Kyaukroe Village) (အင်္ဂလိပ်စာ စာသင်ကျောင်း (ကျောက်ရိုးရွာ)
Two Travellers - ခရီးသွားနှစ်ယောက်
in the noonday sun - နေပူကျဲကျဲထဲတွင်
walking (walk, walking, walked, walked) - လမ်းလျောက်သည်
sought (seek, seeking, sought, sought) - ရှာဖွေခဲ့သည်
the shade ofawidespreading tree to rest - အနားယူဖို့ သစ်ပင်အရိပ်အကောင်းတစ်ခု
shade - အရိပ်
a widespreading tree - အကိုင်းအခက်များဖြန့်ကျက်နေတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်
lay (lie, lying, lay, lain) - လဲလျောင်းသည်
looking up (look up, looking, looked up, looked up) - အပေါ်ကိုမော့ကြည့်နေသော
among the pleasant leaves - နှစ်သက်ကြည်နူးဖွယ်ရာကောင်းတဲ့သစ်ရွက်တွေကြား (တွင်)
useless - အသုံးမကျသော။ အသုံးမဝင်သော
Plane Tree - အကိုင်းအခတ်ဖြာထွက်၍ ပင်စည်အပွေးကွာတတ်သော အပင်တစ်မျိုး
How useless is the Plane! ဘာမှအသုံးမကျတဲ့သစ်ပင်ပါလားနော်။
bear (bear, bearing, bore, born) - အသီးသီးသည်။ မွေးဖွားသည်။ သေးခံသည်
whatever - ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်
only - သာလျှင်။ မျှသာ
serves (serve, serving, served, served,) - တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ လုပ်ဆောင်သည်။
only serves to litter the ground with leaves - သစ်ရွက်တွေတစ်ပုံတစ်ပင်နှင့် ကမ္ဘာမြေကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေရုံသက်သက်ပဲ
Ungrateful creatures! - ကျေးဇူးကန်းလိုက်တဲ့လူတွေပါလား။
grateful - ကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်သော
ungrateful - ကျေးဇူးတရားကိုမသိတတ်သော
creature/ es - ခြေလေးချောင်းသတ္တဝါ။ သက်ရှိသတ္တဝါ
a voice from the Plane Tree - သစ်ပင်မှအသံတစ်ခု
lie - လဲလျောင်းသည်
in my cooling shade - ငါ့ရဲ့အေးမြတဲ့အရိပ်အောက်တွင်
yet - သို့ရာတွင်။ ဒါပေမယ့်
say (say, saying, said, said) - ပြောသည်။ ပြောဆိုသည်
thus - ဒါနဲ့။ ထိုကြောင့်
blessings - ဆုလာဘ်များ
receive - လက်ခံရရှိသည်
Jupiter - ဂျူပီတာ (ကြာပသတေးဂြိုဟ်)
best (goog, better, best) - အကောင်းဆုံးဖြစ်သော
least - အနည်းဆုံး
often - မကြာခဏ
appreciated (appreciate, appreciating, appreciated, appreciated) - နှစ်သက်သည်။ သဘောကျသည်။
_____ အကောင်ချေ (ကျောက်ရိုး)
၁၆ - ၀၈ - ၂၀၁၅
Omusubi Kororin (The Tumbling Rice Balls)
7:05 AM | No Comments |
Once uponatime, an old couple lived in the countryside. They were happy, but they were poor.
One day, the old man went to work in the forest and took his usual lunch of three rice balls. During lunch, he droppedarice ball, and it rolled intoahole in the ground.
He heard happy singing coming from the hole, so he dropped the other two rice balls into it. Inside the hole, some mice were havingaparty. They thanked him for the rice balls and invited him to join them.
Afterawhile, the mice told him to chooseabox asareward for his generosity. He could chooseabig box, or he could chooseasmall one. He thought about takingabig box, but he finally choseasmall one. Back at home, he and his wife discovered that the box was full of gold coins.
A greedy neighbor heard about their good fortune and quickly made plans to visit the same hole. At the hole, he pushed several rice balls into it, and sure enough, the mice invited him in.
The greedy man wanted all of the mice's gold, so he pretended to beacat. He started meowing loudly, and the frightened mice ran away.
The gold disappeared with the mice, so the greedy man got nothing, not evenarice ball.
tumble (tumble, tumbling, tumbled, tumbled) - လိမ့်ကျသည်
countryside - တောရွာကျေးလက်
sure enough - မျှောင်လင့်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်
Once uponatime- တစ်ချိန်တုန်းက၊ ဟိုး…ရှေးရှေးတုန်းက
in the forest- တောအုပ်တွင် ၊ တောအုပ်သို့
took- (take, taking, took, taken) - ယူဆောင်ခဲ့သည်
his usual lunch of three rice balls - သူရဲ့ပုံမှန်ယူနေကျနေ့လည်စာ ထမင်းဆုပ် သုံးဆုပ် (ဘောလုံးလေးကို လုံးထားသော ထမင်းဆုပ်)
during lunch- နေ့လည်စာစားနေစဉ်တွင်
dropped- (drop, dropping, dropped, dropped) - လွှင့်/လွှတ်ချလိုက်ခဲ့သည်
intoahole in the ground-မြေကြီးရှိ အခေါင်းထဲသို့
heard- (hear, hearing, heard, hear) - ကြားခဲ့သည်
happy singing coming from the hole-အခေါင်းထဲမှထွက်လာပေါ်သည့် ပျော်ရွှင်သောသီဆိုသံ
inside the hole-တွင်းခေါင်းထဲမှာ / အခေါင်းထဲမှာ
havingaparty - ပါတီပွဲတစ်ခုကျင်းပနေကြသည်။ ပါတီပွဲတစ်ခု ရှိနေသည်
thanked him for (thank, thanking, thanked, thanked)- အတွက် သူ့ကိုကျေးဇူးတင်သည်
invited (invite inviting, invited, invited) - ဖိတ်ကြားသည်။ ဖိတ်မန်တကပြုသည်
to join them - သူတို့ (ကြွက်များ)နှင့်အတူပါဝင်ဆင်နွဲဖို့
afterawhile - ခဏကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့
asareward - လက်ဆောင် ဆုကြေးတစ်ခုအနေဖြင့် /အဖြစ်
for his generosity - သူ့ရဲ့ရက်ရက်ရောရောပေးကမ်းလှူဒါန်းမှုအတွက်
thought (think, thinking, thought, thought) တွေးတောသည်။ စဉ်းစားသည်
think about +V-ing - ဖို့စဉ်းစားသည်
about takingabig box - သေတ္တာကြီးကိုယူဖို့
finally - နောက်ဆုံးမှာတော့
back at home - အိမ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါ
discovered (discover, discovering, discovered, discovered) - တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
was full of gold coins - ရွှေဒင်္ဂါးများဖြင့်ပြည့်နေသည်
a greedy neighbor-လောဘကြီးသော အိမ်နီးနားချင်းတစ်ယောက်
about their good fortune - သူတို့ကံကောင်းတာနှင့်ပတ်သက်လို့
fortune - ကံတရား။
good fortune - ကံကောင်းသော
quickly - အဆော့တလျင် ။ အလျင်အမြန်။ လျင်မြန်စွာ
made plans (make, making, made,made)- အစီအစဉ်များရေးဆွဲခဲ့သည်။
pushed (push, pushing, pushed, pushed) - တွန်းချလိုက်သည်။ လှိမ့်ချလိုက်သည်
several - များစွာသော
invited him in - သူ့ကို အခေါင်းထဲသို့ဖိတ်ကြားခဲ့သည်
wanted (want, wanting, wanted, wanted) - လိုချင်ခဲ့သည်
all of the mice's gold - ကြွက်တွေမှရှိတဲ့ရွှေအားလုံးကို
pretended (pretend, pretending. pretended, pretended) - ဟန်ဆောင်သည်။ အယောင်ဆောင်သည်
he pretended to beacat - သူဟာ ကြွက်ဟန်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကြွက်အယောင်ဆောင်ခဲ့သည်။
started meowing loudly - မိညောင်ဟု အသံအကျယ်ကြီးအော်လိုက်သည်။
loudly - ကျယ်လောင်စွာ
meowing (meow, meowing, meowed, meowed) - မိညောင်ဟုအော်သည် (ကြောင်အော်သည်)
miaow (US) - မိညောင်ဟုအော်သည် (ကြောင်အော်သည်)
the frightened mice ran away - ကြွက်များဟာ ကြောက်ရွံ့၍ပြေးကြကုန်၏
frightened - ကြောက်ရွံ့သော
ran away (run, running, ran, run) - အဝေးသို့ထွက်ပြေးကြသည်
disappeared (disappear, disappearing, disappeared, disappeared) – ပျောက်ကွယ်သွားသည်
appear - ပေါ်ထွက်လာသည်။ ပေါ်လာသည်
with the mice - ကြွက်များနှင့်အတူ
got nothing (get, getting, got, gotten or got)- ဘာမှမရခဲ့ဘူး။
not evenarice ball - ထမင်းဆုပ်လေးတစ်ဆုပ်တောင် မရခဲ့ဘူး။
____Ref: The Longman Academic Writing Series Level3: Introduction to Academic Writing - Page 29 မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Folktale, General English, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ
aggressive (adj) - ရန်လိုသော
big-headed (adj) - မိမိုကိုယ်ကို အထင်ကြီးသော
compatible (adj) - လိုက်ဖက်သော
cruel (adj) - ရက်စက်သော၊ ကြမ်းကြုတ်သော
neat (adj) - သေသပ်သော
punctual (adj) - အချိန်ကိုက်ဖြစ်သော၊ နောက်မကျသော
အောက်ပါကွက်လပ်တို့တွင် အထက်တွင်ပေးထားသော Adjective တို့ဖြင့် မှန်ကန်စွာဖြည့်ပေးပါ။
a. ____________ carefully arranged and looking nice
b. ____________ behaving inaway that shows you think you are very important or intelligent
c. some who is __________ enjoys causing pain to other people or animals
d. ____________ behaving in an angry or rude way
e. ____________ arriving or happening at the time agreed on
f. ____________ likely to haveagood relationship because of being similar
happy (adj) - ပျော်ရွှင်သော
happiness (n) - ပျော်ရွှင်မှု
happily (adv) ပျော်ရွှင်စွာ
enjoyable (adj) - ပျော်ရွှင်သော
enjoyment (n) - ပျော်ရွှင်မှု
enjoyably (adv) - ပျော်ရွှင်စွာ
pleasing (adj) - ဝမ်းသာအားရဖြစ်သော
pleasure (n) - ဝမ်းသာအားရဖြစ်မှု
pleasingly (adv) - ဝမ်းသာအားရစွာ
amusing (adj) - ရွှင်မြူးဖွယ်ရာဖြစ်သော
amusement (n) - ရွှင်မြူးဖွယ်ရာ
amusingly (adv) - ရွှင်မြူးစွာ
အောက်ပါကွက်လပ်တို့တွင် အထက်တွင် ပေးထားသော (adj/ n/ adv ) တို့ကိုမှန်ကတ်စွာဖြည့်ပေးပါ။
a. We all laughedalot because the joke was so ___________.
b. "It wasa___________ to meet you, Mr. Jones."
c. Sally and Tom said the party was really ________________.
d. "Thank you forawonderful evening," I said ____________.
e. I finally found ___________ the day I met Clarissa.
___ အကောင်ချေ (ကျောက်ရိုး)
၁၄ - ၀၈ - ၂၀၁၅
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာ့တီကရတဲ့ Hand out ကနေကူးယူဖော်ပြပါသည်။
4:04 AM | No Comments |
Read this text. Then choose which statements you can infer.
The key to happiness may be great relationships with family and friends, or it might beafull and busy life. It could be havingajob that you really enjoy. But whatever the key is for you, you must try to make it happen! If you're not happy, you should ask yourself why and try to change things. Think about your abilities and interests. What are you doing at? What do you like doing? What kind of life do you want to have? You don't have to change everything immediately, but never think that what you want is impossible. What you decide to change, you shouldn't worry about what other people may think. Just do it!
It's always good to be busy.
It's important to change your situation if you are unhappy.
It's important to listen to the advice of other people.
Possibility (ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖော်ခြင်း) -- may, might, could - နိုင်သည်။
The key to happiness may/ might/ could be great relationship.
Impossibility (ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိကြောင်းဖော်ပြခြင်း) -- can't - မ..... နိုင်။
Some people say you can't be happy without money.
Strong Obligation (လေးလေးနက်နက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုချက်ကိုဖော်ပြခြင်း) -- must - ရမယ်။
Whatever the key is for you, you must try to make it happen.
Weak Obligation (သာမန်အကြံပြုချက်ကိုဖော်ပြခြင်း) - should - သင့်သည်။
If you're not happy, you should ask yourself why.
No Obligation (မလိုအပ်ကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်း) - don't have to - မလိုအပ်ဘူး။
Study the modal verbs above, and then choose the best answer to complete each sentence.
1. Believe it or not, you _____ be rich to be happy.
(a) must not (b) shouldn't (c) don't have to (d) might not
2. Continuing to doajob you dislike _______make you unhappy.
(a) should (b) could (c) shall (d) ought to
3. Expert agree that you _____ except to be completely happy all the time.
(a) shall not (b) may not (c) should not to (d) shouldn't
4. Happiness _______ be connected to religious beliefs, too.
(a) would (b) had better (c) shall (d) might
5. Some people think that you _______ measure happiness.
(a) wouldn't (b) can't (c) must not (d) may not
6. It _____ sound strange, but the best way to find out is simply to ask yourself "How happy am I?"
(a) can't (b) would (c) might (d) should
7. Research shows that you _____ be healthy to be happy, but it helps.
(a) shouldn't (b) can't (c) don't have to (d) must not
8. To say happy in difficult situations, you ______ keep thinking positively.
(a) must (b) must not (c) can't (d) might not
General English, General Reading, Reading, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ
ဘာသာပြန်အပိုင်းအစများ (၂) ရုရှားစစ်လေယာဉ်များအား စုံစမ်းထောက်လှန်ဖို့အတွက် RAF ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များအား အရေးပေါ်စွှေလွှတ်ခဲ့
ရုရှားစစ်လေယာဉ်များအား စုံစမ်းထောက်လှန်ဖို့အတွက် RAF ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များအား အရေးပေါ်စွှေလွှတ်ခဲ့
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က တော်ဝင်လေတပ်တိုင်ဖုန်း(Royal Air Force Typhoon) ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များဟာ စိန့်အန်ဒရော (St Andrews) နှင့် ဖိဖီ (Fife) ရှိ RAF Leuchars မှ ပျံတက်ခဲ့ပါတယ်။
= Royal Air Force - တော်ဝင်လေတပ်မတော်
= take off - မြေပြင်မှပျံတက်သည် (လေယာဉ်)
take off, taking off, took off, taken off
များမကြာမီနောက်မှာတော့ ပြန်လည်လှည့်ပြန်သွားတယ်ဟု ယုံကြည်ရတဲ့ ရုရှားလေယာဉ်တို့ကို စုံးစစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက် (RAF) ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တို့အား လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
(ရုရှားလေယာဉ်တို့ကို စုံးစစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက် (RAF) ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တို့အား လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
၎င်းရုရှား လေယာဉ်တွေဟာ များမကြာမီနောက်မှာတော့ ပြန်လည်လှည့်ပြန်သွားတယ်ဟု ယုံကြည်ရပါတယ်။)
=jets (n) - ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များ။
=to investigate (infinite)- စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့/ရန်အတွက်။
= the Russian planes - ရုရှားလေယာဉ်များ။
= believed (v3) believe, believing, believed, believed, - ယုံကြည်ရသည်။ ယုံကြည်သည်။
=turn away - အဝေးကိုလှည့်ပြန်သွားသည်။
=afterwards (adv) - နောက်မှ။
=shortly (adv) - တိုတောင်းစွာ။ အချိန်တိုအတွင်း။
S+Be+V3 - ခံရကြောင်းကိုပြခြင်း (Passive Voice)
The jets were sent. (Passive Voice)
ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တို့ကို ပို့လိုက်သည်/ လွှတ်လိုက်ခဲ့သည်။
Some sent the jets. (Active Voice)
တစ်ယောက်ယောက်က ဂျက်လေယာဉ်တွေကို လွှတ်လိုက်ခဲ့သည်။
The tourist were robed on the beach yesterday.
မနေ့က ကမ်းခြေမှာ ခရီးသည်တွေလုယက်ခြင်းကို ခံခဲ့ကြရတယ်။
N+ which+ V
the Russian planes, which are believed - ယုံကြည်ရသော ရုရှားလေယာဉ်များ
(which ဟာ Relative Pronoun (conjunction) ဖြစ်တယ်။ ဒါကို Adjective Clause ဟုခေါ်တယ်။ ၎င်း Which က the Russian planes ကိုအထူးပြုတယ်။)
Who - ဘယ်သူသည် (လူ - Subject)
Whom - သယ်သူ့ကို (လူ - Object)
With whom - ဘယ်သူနှင့် (လူ - Preposition)
Which - ဘယ်အရာ (အရာဝတ္ထု နှင့် တိရစ္ဆာန် - Subject နှင့် Object)
That - ဘယ်အရာ (လူ၊ အရာဝတ္ထုနှင့် တိရစ္ဆာန် - Subject နှင့် Object)
San San who isanurse - နာ့စ်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သော စန်းစန်း။
Twan Twan who is kissed - အနမ်းခံရသော ထွန်းထွန်း
The books which/ that were bought yesterday - မနေ့ကဝယ်ခဲ့သောစာအုပ်များ
San San with whom I have studied English ငါ့နှင့်အတူ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာဖူးသော စန်းစန်း
I love San San who isanurse.
နာ့စ်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စန်းစန်းကို ငါချစ်တယ်။
San San who isanurse is my younger sister.
နာ့စ်မလေးတစ်ဦးဖြစ်သော စန်းစန်းဟာ ငါ့ရဲ့ ညီမငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
The books which/ that were bought yesterday are very popular now.
မနေ့က ငါဝယ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်က အခုအချိန်မှာ တော်တော့်ကို ပေါ်ပျူလာဖြစ်နေတယ်။
Do you want to read The books which/ that were bought yesterday?
မနေ့က ငါဝယ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကို ခင်ဗျားဖတ်ချင်လား။
=scramble - (v) (လေယာဉ်) အရေးပေါ်ချက်ချင်းပျံတက်သည်။
=incidents - (n) ဖြစ်ရပ်များ
=spokesman - (n) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ
Common Verbs to Study by Heart = အလွတ်ကျက်မှတ်ရန်အသုံးများသော ကြိယာများ
8:11 PM | No Comments |
= အိပ်ရာမှ နိုးသည်
= အိပ်ရာမှ ထသည်
= စားသည်၊ သောက်သည်၊ ပိုင်ရှိသည်
= သောက်/စား/ ယူဆောင်သည်
= အဝတ်လဲသည်၊ ဝတ်ဆင်သည်
= မွေးဖွားသည်၊ အသီးသီးသည်
= ပြင်ဆင်သည် (အသင့်ဖြစ်အောင်)
= မှီခိုသည်၊ အမှီပြုသည်
Can’t resist + V-ing
= (မစားဘဲ) မနေနိုင်
= ဆူပွက်သည်၊ ကျိုချက်သည်၊ ပြုတ်သည် (ကြက်ဥစသည်..)
= စက်ပစ္စည်းစသည်ကို ကိုင်တွယ် အသုံးပြုသည်
= ဝန်ခံသည်၊ ဒေသနာကြားသည်
= ရိုသေ/ လေးစားသည်
= ကြေညာသည် (စစ်/အရေးတကြီးကိစ္စ စသည်..)
= အခုပ်ခန့်သည်၊ ချိန်းချက်သည်
= သတင်းကြေညာ အသံလွင့်သည်
= နိုင်ငံခြားမှ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းသည်
= နိုင်ငံခြားသို့ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့သည်
= (တံခါး) ခေါက်သည်
= (အိမ် စသည်ကို..) ငှားသည်
= ခြေဦးတည်ရာ သွားသည်
= မှ..ဘွဲ့ရသည်၊ ဘွဲ့ယူသည်
General English, Verb Forms, Verbs, vocabulary, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ
ပန်းအမျိုးမျိုးအမည်နာမများ - The Name of the Diffe...
'Used to do' and 'Be used to + N/ V-ing အသုံးပြုပံ...
ဘာသာပြန်အပိုင်းအစများ (၂) ရုရှားစစ်လေယာဉ်များအား ...